.သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံက တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ချီတဲ့ သတင်းစာမှာ ချီးမွမ်းဖော်ပြခံခဲ့ရပြန်တဲ့ ပိုင်တံခွန်. – Askstyle
.သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံက တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ချီတဲ့ သတင်းစာမှာ ချီးမွမ်းဖော်ပြခံခဲ့ရပြန်တဲ့ ပိုင်တံခွန်.
ႏိုင္ငံေက်ာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမာ္ဒယ္ ပိုင္တံခြန္က လက္ရိွမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ဆန္းအတက္ဆံုးအခ်ိန္ကို ေရာက္ရိွေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္တံခြန္က ျပည္တြင္းမွာသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံေတြထိပါ ထိုးေဖာက္ေအာင္ျမင္ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး (၁၁) ရက္တာ သကၤန္းစည္းျပီး ျပန္ထြက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ သူ့ရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိကို တိုးတက္လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာက သတင္းစာေတြ၊ တီဗီရုပ္သံသတင္းေတြ၊ ဝဘ္ဆိုဒ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပခံေနရတဲ့ ပိုင္တံခြန္က ေန့စဥ္ေန့တိုင္းလိုလို သူ့ရဲ့ သတင္းေကာင္းေတြကို ေနရာအနွံ့မွာ ျမင္ေတြ့ေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန့မွာလည္း ပိုင္တံခြန္က သကၤန္းဝတ္နဲ့ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုေၾကာင့္ မေလးရွားနိုင္ငံက တစ္နုိင္ငံလံုးျဖန့္ခ်ီတဲ့ သတင္းစာမွာ ခ်ီးမြမ္းေဖာ္ျပခံခဲ့ရတာကို ေတြ့ရပါတယ္။ မေလးရွားနိုင္ငံက သတင္းစာထဲမွာ ပိုင္တံခြန္ရဲ့ (၁၁) ရက္တာ သကၤန္းစည္း ဘုန္းၾကီးဝတ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို အသားေပးေရးသားခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပိုင္တံခြန္ရဲ့ အနုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကို ေဖာ္ျပထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ ေန့စဥ္ေန့တိုင္းလိုလိုမွာ သူ့ရဲ့ ေကာင္းသတင္းေတြကို နုိင္ငံအနွံ့မွာ ျမင္ေတြ့ရလုိ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ပီတိျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း ျမန္မာ့ဂုဏ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္ေနတဲ့ ပိုင္တံခြန္အတြက္ ထပ္တူဂုဏ္ယူေနမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံက တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ချီတဲ့ သတင်းစာမှာ ချီးမွမ်းဖော်ပြခံခဲ့ရပြန်တဲ့ ပိုင်တံခွန်
နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ် ပိုင်တံခွန်က လက်ရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ ဆန်းအတက်ဆုံးအချိန်ကို ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်က ပြည်တွင်းမှာသာမက ပြည်ပနိုင်ငံတွေထိပါ ထိုးဖောက်အောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး (၁၁) ရက်တာ သင်္ကန်းစည်းပြီး ပြန်ထွက်လာချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိကို တိုးတက်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက သတင်းစာတွေ၊ တီဗီရုပ်သံသတင်းတွေ၊ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ ဖော်ပြခံနေရတဲ့ ပိုင်တံခွန်က နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလို သူ့ရဲ့ သတင်းကောင်းတွေကို နေရာအနှံ့မှာ မြင်တွေ့နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း ပိုင်တံခွန်က သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံက တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ချီတဲ့ သတင်းစာမှာ ချီးမွမ်းဖော်ပြခံခဲ့ရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံက သတင်းစာထဲမှာ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ (၁၁) ရက်တာ သင်္ကန်းစည်း ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို အသားပေးရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်ကတော့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုမှာ သူ့ရဲ့ ကောင်းသတင်းတွေကို နိုင်ငံအနှံ့မှာ မြင်တွေ့ရလို့ တော်တော်လေး ပီတိဖြစ်နေမှာ သေချာပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မြန်မာ့ဂုဏ်ကို အမျိုးမျိုးဆောင်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်အတွက် ထပ်တူဂုဏ်ယူနေမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။